အပြောင်းအလဲမှာအစီအမံနှင့် မူဝါဒကောင်းများ ချမှတ်နိုင်ရမည်
ဈေးကွက်အဖွင့်မူဝါဒကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍဟာဦးဆောင် ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှုလို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု... More
ဒေါ်လာဈေး တက်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ
ဒေါ်လာဈေးအတက်အကျကြောင့် ကောင်းကျိုးစီးပွား တိုးများလာသည့်နိုင်ငံရှိသလို အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်နိုင်စေမည့် နိုင်ငံများလည်း ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်လာလျှင် ၄င်းနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးတန်ဖိုးသည်လည်းတက်လာလေ့ရှိသည်။ တစ်ဆက်ထဲမျာပင် နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းကြီးများနှင့် နိုင်ငံသ... More
SMEs Development on Trade – Dr.MaungAung
Topic : SMEs Development on Trade Presentation by : Dr. MaungAung (Advisor, MOC) Description:
( 1 ) Global Economic Scenario & Emerging Myanmar (ထွန်းသစ်စ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်များ)
(2) Emerging oppor... More
SME များနေရာမှန် အချိန်မှန် အောက်မြင်ရေးသို.
SME များနေရာမှန် အချိန်မှန် အောက်မြင်ရေးသို. လုပ်ဆောင်ချက် ၁။ မိမိအဖွဲ့ကို အောက်ခြေမှ စ ကာ၊ ဖောက်သည်များ အဆင့်ထိ လိုက်ကြည့် လေ့လာကြည့်ပါ။ ၂။ ခွဲခြမ်းလေ့လာဆန်းစစ်ပြီး၊ အဖွဲ့၏ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရ... More